IiPaki zeNdlela zeMindeni kunye nabantwana abaselula
Uhambo lweentsapho Park Parks
Uninzi lweepaki zikhwele, amazwe, kunye nezinye iimpawu kwiindwendwe ezincinci. Cinga Fantasyland kwi-Magic Kingdom kunye ne-Disneyland. Kodwa iipaki ezimbalwa zijoliswe ngokupheleleyo kwi-12-nangaphansi. Fumana indawo yemilingo apho abantwana bakho abancinci babeya kukwazi ukukhwela iindwendwe ezininzi.
Ukungena kweLaloland California. Arthur Levine
Uyayazi iLosos. Uninzi lwabantwana banalo ibhakethi yeebhloko zokudibanisa kwiibhokisi zabo zokudlala. Khawucinge ngepaki yonke eyakhiwe e-Legos kwaye ikhutshwe ngemibala yayo ephambili. Kukho ii-coasters ezifunekayo (nakuba zizintlu), kodwa ezininzi zezixhobo ezikhangayo zihamba ngokuzibandakanya, izandla, ukusebenzisana, izidalwa ze-Lego.
Le nguyi-Florida version yepaki ye-Lego-themed. Njengomlingani wayo waseCalifornia, ulungelelaniso lwe-12 nangaphansi. Iquka ipaki yamanzi e-Lego. linika neehotele ezimbini kwiihotele. I-Legoland yaseFlorida igcine ezinye zezinto ezivela kwisayithi yangaphambili yokuzalwa njengeCypress Gardens , kubandakanywa nezitidi ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye ne-ski show, eyaziwayo ngeenkwenkwezi ze-Lego.
Izinto ezili-10 ezilungileyo ukuzenza kwiLololand eFlorida
I-Transity / Wikimedia iiConsons / Creative Commons
Eyona nto ibonakaliswe kumboniso wezingane zePBS, i-Sesame Place yenzelwe abaphulaphuli abancinci ngokugxininiswa ngokukhethekileyo kubaphulaphuli beprogram.
UDennis Jarvis / Flickr / CC BY 2.0
Abantwana abali-12 nangaphezulu bangenakunomdla kwiNdaba yeLizwe laseNew Hampshire, kodwa abantwana abaselula babeza kubonakaliswa kwi-charm charm. Kwaye abantu abadala babeya kukuncoma i-nostalgia ecaleni. Ukutshatyalaliswa emva kwee-1950s, icandelo eliphambili lepaki ligcina i-tableaus eninzi yebali yamabali efana ne-Old Woman in the Shoe, i-Humpty Dumpty, ne-Three Little Pigs (eneengulube zangempela!). Umva wepaki unikezela izinto ezikhangayo zanamhlanje zibandakanya ukukhwela kwe-raft emangalisayo, i-roller roller coaster, kunye ne-log flume ride, kodwa iindawo ezivuyisayo zithengiswa kumanqanaba okulinganisa.
Ukuhlaziya iRow-O-Saurus, i-Coaster coaster kwiNdaba yoMhlaba.
Awu, iintaba ezimhlophe. I-New Hampshire ephakamileyo yoMongameli weRiphabliki inikezela izinto ezintle kakhulu: iindawo eziphakamileyo zentaba ezicubungelayo ngamafu elanga, ihlathi elimangalisayo leSizwe e-Kancamagus Highway, imoto ebomvu ne-green Dodgem ehlwayelanayo eSanta Village. Ukumangalela ukumangalisa kwimimangaliso yemvelo yendawo, abantwana bathanda ukhenketho olwenziwa ngumuntu njengeSanta Village. Kwiminyaka emininzi, ipaki ibe yinto ebaluleke kakhulu, kodwa ibaluleke kakhulu kwiminikelo yeholide yokufudumala yemozulu.
URon Shawley / Getty Izithombe
Enye yeepaki zelizwe eziyinkokheli zeentsapho ezinabantwana abancinane, i-Idlewild ilayishwe ngetrakra kunye ne-genuine nostalgia yekhangelo eliye labuyela emva ngo-1878. I-Olde Idlewild, enye yeendawo ezisixhenxe epakini, ibonisa umdla okhangeleka njengeklasi 1920s, i-Caterpillar ye-1947-enye yezinto ezimbini eziseleyo ezisasebenzisa i-canopy, kunye ne-circa-1938 i-Rollo Coaster, i-coaster coaster.
UJim, uMfaki-zithombe / Flickr / CC BY 2.0
Ukuqhayisa isayinwe kwindlu yokungena kwayo, iWandland yaseWandland kwilizwe lase-Pennsylvania lama-Amish liphatha abantwana abancinane njengamakhosi. Uninzi lweentambo zalo zijoliswe kwi-12-nangaphansi, kusetyenziswe iindwendwe ezincinane kunokuba zihambisane neentlobo ezikhangayo xa zihamba nomntu omdala.
Edaville USA Ehamba noTomas Land
Thejawsride / Wikimedia Commons / CC BY 3.0
Ngo-2015, ipaki elincinci, elaliqeqeshelwa uqeqesho eMassachusetts, yavula uTomas Land njengenxalenye yokwanda okukhulu. Ibonisa ukukhwela kunye nezokhenketho ezisekelwe kwisiboniso esidumile sePBS, uTomas & Abahlobo . Ipaki inika kwakhona njengelizwe le-dinosaur, ii-coasters kunye nezinye iinqwelo.
Ukubhiyozela iiNtsuku zokuzalwa kwiWalt Disney World
Thatha i-Ride Ride ukusuka kwi-Hogwarts Express
Ukubukela kwangaphambili: I-Universal Aventura Hotel kwi-Universal Orlando Resort
Indlela yokuxhatshaza i-Carowinds 'Intimidator?
I-Pop-Eye Funping kwi-Shrek 4-D Ride
Iintlobo zeenqophiso zeTech Park
UKUQHUBEKA: I-Rancho La Puerta, i-First Destination Spa
Yintoni enokuyenza eGoli, eMzantsi Afrika
Casa Velas Puerto Vallarta, eMexico
I-San Francisco Victorian Architecture
Isikhokelo seKikilano Beach eVancouver, BC
Amazwe aphesheya ase-Europa-Park - Icandelo 2
Dive kuma-Aquariums aphezulu aphezulu aseMerika
I-Sharks onokuyilandela nge-Twitter Eli hlobo
Iikitikhi zeRephabliki zeDepublic Day Dayade
Izixeko ziindawo eziMnandi kwiHunmoon
Iingcebiso zokuthenga i-inshurensi yohambo
Imikhosi ye-Bullfighting eSpeyin: Ikhalenda kunye neendawo